F4 ချစ်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » F4 ချစ်သူ
Posted by မမလေး on May 6, 2011 in Myanma News | 13 comments
မြန်မာ F4 လာတော့မယ် ..
F4 ချစ်သူ အခွေကို သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ တရုတ် F4 ချစ်သူ ၊ ဂျပန် F4 ချစ်သူ နဲ့ ကိုရီးယား F4 ချစ်သူ ဆိုပြီးတော့ရှိရာမှာမှ ကိုရီးယား F4 ချစ်သူ က လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်နာမည်ကြီးသွားတယ် …. ခု မြန်မာ F4 ချစ်သူ လာပါတော့မယ် ။ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်က F4 မင်းသားနဲ့ တူတဲ့ မင်းသား မင်းသမီးကို အပြင်လောကမှာလိုက်ရှာတာ ခုဆို မင်းသားလေးယောက်နဲ့တူတဲ့ လူလေးယောက်တွေ့နေပါပြီတဲ့ … ကိုရီးယား F4 ချစ်သူ အတိုင်းကို တူအောင်ပြန်ရိုက်မှာလို့ ကျူရှင်ကနေပြီးကြားလာပါတယ် ။ ဂျာနယ် တစ်စောင်မှာပါတယ်လို့ပြောတာပဲ … တစ်ကယ်လို့သူတို့နဲ့တော်တော်တူတယ်ဆိုရင်တော့ ခုလက်ရှိမင်းသားတွေ ဘယ်ချောင်မှာသွားနေရမယ်မှန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးနော် …
၁- ကြောင်ကြီး ၂- ကိုကြောင် ၃- ဘစ်ကက် ၄- bigcat
ပုံထဲက ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးနဲ့ဆိုလို့ကတော့ ရိုက်အုံးမှာ…..
ကိုရီးယား မင်းသမီးက တချိန်က ဖြိုးတဲ့ ဦးကြောင်ကြီး အဆင်ပြေလား
ဂျီဟိုနဲ့ တူလို့တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမင်းသား တင် ရိုက်ဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်
တို့ ဗမာတွေကလည်း ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ မလုပ်နိုင်ဘူးနော်။ သူများ အောင်မြင်ပြီးသားကို လိုက်ရိုက်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်။ အင်တာနက်ကနေ အလွမ်းပြေ ဗမာကားတွေကြည့်ပါတယ် သူများဇာတ်ကားတွေကို ပြန်ရိုက်တာတွေပဲ။ ဟိုးအရင်ကဆို မြန်မာ့အသံက ပြတဲ့ ဗမာကားတွေ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
( ကျွန်တော်က နိုင်ငံခြားကားဆိုလုံးဝမကြည့်ဘူး
အင်မတန်ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့ F4ချစ်သူကနေ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ F4ချစ်သူကြည့်ရတော့မယ်။
ရွာ သားတွေစုလိုက်ရင် F4 ထက်တောင်သာသွားအုန်းမယ်။
ရုပ်တူရုံနဲ့တင်တော့ ဘာမှသုံးရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုလည်း ကြည့်ရဦးမယ်။ ဘေးကပံ့ပိုးပေးတဲ့ အဆောင်အယောင်အခမ်းအနားတွေကလည်း လိုသေးတယ်နော်။ အဲဒီလို လုပ်မယ့်အစား ဟိုးးးးးးးးးးးးးအရင်တုန်းကလို ကိုယ့် idea နဲ့ ကိုယ့်ရေမြေသဘာဝနဲ့ ကိုက်ညီတာကို ရိုက်ရင်တောင် ပိုအောင်မြင်နိုင်ဦးမယ် ထင်တယ်။ နေခြည်ဖြာမှ နွေးသောကြောင့်တို့၊ သင်္ကြန်မိုးတို့၊ အတွေ့ တို့ အဲလိုရုပ်ရှင်မျိုးတွေလိုမျိုး own tune တွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ ကိုရီးယားတွေရိုက်တဲ့ ကိုရီးယားကားကို ကြိုက်သလို၊ မြန်မာတွေရိုက်တဲ့ မြန်မာကားစစ်စစ်တွေကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။
ဦးဝင်းဦး ရိုက်တဲ့ မောင်တို့ ချယ်ရီမြေဆိုရင် တထပ်တည်းကို ကျတယ်.. မြန်မာမှု ပြု သက်သက်ပါပဲ။ အရမ်းကောင်းတယ်။
F4 ချစ်သူများအတွက် ငှက်ကြီးတင်ထားဖူးတာ အခုလာမဲ့မင်းသားအသစ်တွေလားမသိဘူး။။အဟီး။။
ကိုရီးယား မင်းသား မင်သမီးတွေက အကုန်လုံးပြုပြင်ထားကြတာဆိုပဲ.. မျက်ရစ်ဖော်တယ် ၊နှာတံ ပေါ်အောင် နှာရိုးချိုးတယ် ၊ပါးချိုင့်ဖော်တယ်၊ နှုတ်ခမ်းဆေးသွင်းတယ် ၊ မျက်ခုံးမွေး စိုက်တယ် ၊လိုတဲ့နေရာ စီလီကွန်ဆိုလားထည့်တယ် ၊ပိုတဲ့နေရာဖြတ်ထုပ်တယ်.. အဲဒီလို ကြားတယ်..ကိုကြောင်ကြီးရွေးထားတဲ့ မင်းသားတွေလဲမြန်မာပရိသတ် လက်ခံလာအောင်.
အဲဒီလို ဖြတ်မယ် ၊ဖေါက်မယ် ၊ချုပ်မယ် ပြုပြင်ရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်……..
ကောင်းတယ်မလုပ်နဲ့လေ နာမှာလည်း တွေးရဦးမယ် … ကြောက်စရာကြီးဟ … နောက်နှစ် နှစ်လောက်မှ ခွေက ထွက်မယ်ထင်တယ်နော် …